Agaasimaha Fulintu wuxuu u baxayaa Mekong Madasha Maalinta Dalxiiska Adduunka Hadda Heerarkii Ugu Dambeeyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Agaasimaha Fulintu wuxuu u baxayaa Mekong Madasha Maalinta Dalxiiska Adduunka Hadda Heerarkii Ugu Dambeeyay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Cambodia Breaking News • Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • Wararka Laos • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • Wararka Burburinta Myanmar • News • Dadka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Jabinta Vietnam
Agaasimaha Fulinta Xafiiska Xiriirinta Dalxiiska Mekong Jens Thraenhart
Dalxiiska Mekong wuxuu ku wajahan yahay Oktoobar mashquul ah oo leh laba munaasabadood oo muhiim ah si loo soo afjaro Jens Thraenhart ku dhawaad ​​siddeed sano oo hoggaamineed oo soo afjarmaya Oktoobar 15.
Mashaariicda la soo bandhigi doono waxaa ka mid ah bilaabista mareeg cusub oo Macaamiisha aruurinta Khibrad Mekong iyo dhajinta Qorshaha Isgaarsiinta Dalxiiska Mekong.
Waxa kale oo ka mid noqon doona ogeysiiska abaalmarinta Mekong Hero ee 2021 iyo garoomada ugu dambeeya ee Mekong Innovations in barnaamijka Dalxiiska Waarta (MIST).
Kuwani waxay noqon doonaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Dalxiiska Mekong ee Agaasimaha Fulinta ee hadda.
Agaasimaha fulinta ee xilka ka sii degaya Jens Thraenhart ayaa faallo ka bixiyay: “Maaddaama aan ku dhow yahay dhammaadkii ku dhawaad ​​siddeed sano oo aan ahaa agaasimaha fulinta ee Xafiiska Iskuduwaha Dalxiiska Mekong, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeeyo kooxdeena yar si aan u soo saarno laba dhacdo bisha Oktoobar.”
Liiska cajiibka ah ee mashaariicda lagu soo bandhigi doono labada munaasabadood waxaa ka mid ah bilowga aruurinta Khibrad Mekong oo cusub mareegaha macaamiisha, dhajinta Qorshaha Isgaarsiinta Dalxiiska Mekong, ku dhawaaqidda abaalmarinta Mekong Hero ee 2021, iyo goobihii ugu dambeeyay ee Mekong Innovations in Dalxiis waara barnaamijka (MIST) ayaa ka warbixiya TTR Weekly.
Thraenhart wuxuu xusayaa "inay noqon doonaan dhacdooyinkii iigu dambeeyay ee Dalxiiska Mekong, laakiin waan sii xirnaan doonaa waxaanan rajaynayaa inaan kula xiriiro dhammaantiin."
Jens Thraenhart ayaa dhawaan loo magacaabay a Geesi Dalxiis by ay Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) . Abaalmarintani waxay aqoonsanaysaa kuwa muujiyey hoggaan aan caadi ahayn, hal-abuurnimo, iyo ficillo, Jens wuxuu si joogto ah ugu guulaystay inuu hormuud u noqdo dalxiiska mas'uulka ka ah iyo ajandayaasha dalxiiska ee waara, isagoo aragti iyo faa'iidooyin u keenaya SME-yada iyo bulshooyinka, iyo diblomaasiyad ahaan u xardhaysa ajendaha horusocod ee heerka sare ee dadweynaha-gaarka ah iskaashi.
TTR WEEKLY ayaa sheegaysa in wada -xaajoodyada ku saabsan magacaabista agaasimaha fulinta ee beddelka ah ay ku dhowaan doonaan siligga si lixda dal ay ugu heshiiyaan cidda kala wareegeysa Thraenhart.
Sida qorshuhu yahay, MTCO lixda dal (Cambodia, China, Laos, Myanmar, Vietnam, iyo Thailand), waxay u baahan yihiin inay ku dhawaaqaan doorashadooda Meest Mekong Summit laga bilaabo Oktoobar 21-22. Maalinta ugu dambaysa ee Thraenhart ee xafiiska MTCO waxaa loo qoondeeyay Oktoobar 15.
Meesha Mekong Forum Maalinta Dalxiiska Adduunka Oktoobar 6-7
Dhacdada dalwaddu waxay iftiimin doontaa gabagabada 2021 ee u tartamay abaalmarinta sannadlaha Mekong Innovations in Dalxiiska waarta (MIST) & Khibradaha Mekong Showcases (EMS).
Tartamayaasha u sharraxan liiska kama dambaysta ah ayaa ka dhigi doona garoonkooda kama -dambaysta ah madasha dalwaddu, iyagoo qaadaya heer dhexe si ay u soo bandhigaan dadaallada dalxiiska waara iyo shirkadaha bulshada.
Waxaa jira 15 u -tartameyaal loogu talagalay Bandhigga Mekong ee Khibradda 2021 oo ka socda Cambodia, Lao PDR, Thailand, Vietnam, iyo Guangxi iyo Yunnan ee Shiinaha. Sababtoo ah xaaladda hadda ka jirta Myanmar, guddiga Kooxda La -talinta Dalxiiska ee Mekong waxay go'aansadeen inay u aqoonsadaan dhammaan meheradaha liis -gareysan ee Myanmar inay yihiin Mecong Showcases Experience.
Isku qor lacag la'aan halkan.
Goobta Mekong Mekong Summit Oktoobar 21-22
Dhacdada dalwaddu waxay ka muuqan doontaa khudbadaha muhiimka ah sida naqshadeeyaha hoteelka Bill Bensley iyo hal -abuurka saameynta bulshada Jimmy Pham, aasaasaha shirkadda Hanoi ee ku saleysan ganacsiga iyo qaataha Mekong Showcase, KOTO (Ogow Mid -Baro Mid).
Dadka kale ee ku hadla waxaa ka mid ah guuleystaha MIST 2018, Aroun KKK ee Bamboo Lao, iyo MIST 2019 Finalist, Ros Rotanak oo ka tirsan Chef Nak oo fadhigiisu yahay Cambodia. Hadallada soo -dhoweynta waxaa bixin doona Natalia Bayona, Agaasimaha Hal -abuurka, Maalgashiga, iyo Waxbarashada Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO), iyo Steven Schipani, Khabiirka Warshadaha Dalxiiska ee Bangiga Horumarinta Aasiya (ADB).
Madasha waxaa toos looga dhexdhexaadin doonaa Shaybaadhka Hal-abuurka ee Dugsiga Ganacsiga Sasin ee Bangkok-bssed Chulalongkorn University.
Intii lagu guda jiray shir -madaxeedka, guddoomiyaha guddiga xulashada Mekong Heroes, Kobkarn Wattanavrangkul, oo ahaa Wasiirkii hore ee Dalxiiska iyo Ciyaaraha, ayaa ku dhawaaqi doona qofka ku guuleystay abaalmarinta Mekong Hero ee 2021.
Macluumaad dheeri ah iyo isdiiwaangelin, booqo halkan.
Xafiiska Isu -duwaha Dalxiiska Mekong (MTCO) waxaa laga maamulaa xafiisyada Waaxda Dalxiiska ee Wasaaradda Dalxiiska iyo Ciyaaraha Thailand, oo fadhigeedu yahay Bangkok, waxaana lagu aasaasay maalgelinta lixda dawladood ee Cambodia, China, Laos, Myanmar , Fiyatnaam, iyo Thailand, oo matalaya Sub-region Greater Mekong (GMS).